တကယ်လို့ အာရ်ကာန်မြေရဲ့ မူလပိုင်ရှင်က ရိုဟင်ဂျာတွေ ဆိုပြီး သက်သေပြနိုင်ရင် ခင်ဗျားတို့ ကိုရွှေရခိုင်တွေ အားလုံး ဗမာပြည်မကို ထွက်သွားပေးမလား? ဗမာပြည်မကရော ရခိုင်တွေအားလုံးကို လက်ခံပေးမလား? “ဇ” ရှိရင်ထွက်လာခဲ့ … | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeတကယ်လို့ အာရ်ကာန်မြေရဲ့ မူလပိုင်ရှင်က ရိုဟင်ဂျာတွေ ဆိုပြီး သက်သေပြနိုင်ရင် ခင်ဗျားတို့ ကိုရွှေရခိုင်တွေ အားလုံး ဗမာပြည်မကို ထွက်သွားပေးမလား? ဗမာပြည်မကရော ရခိုင်တွေအားလုံးကို လက်ခံပေးမလား? “ဇ” ရှိရင်ထွက်လာခဲ့ …
တကယ်လို့ အာရ်ကာန်မြေရဲ့ မူလပိုင်ရှင်က ရိုဟင်ဂျာတွေ ဆိုပြီး သက်သေပြနိုင်ရင် ခင်ဗျားတို့ ကိုရွှေရခိုင်တွေ အားလုံး ဗမာပြည်မကို ထွက်သွားပေးမလား? ဗမာပြည်မကရော ရခိုင်တွေအားလုံးကို လက်ခံပေးမလား? “ဇ” ရှိရင်ထွက်လာခဲ့ …
January 7, 2017 drkokogyi
“ရခိုင်မြေမှာ ရိုဟင်ဂျာ မရှိဘူး” – လို့ ခင်ဗျားတို့ ဆန္ဒပြခွင့် ရှိပေမယ့် “ရိုဟင်ဂျာမြေမှာ ရခိုင် မရှိဘူး” – လို့ ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒပြခွင့် မရှိဘူး။
အခုအချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့က လူများစု၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရက ခင်ဗျားတို့ဘက်က .. ဥပဒေက ခင်ဗျားတို့ကို ကာကွယ်ပေးပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကို ကာကွယ် မပေးဘူး။
အဲဒီတော့ အခမ်းအနားလုပ်ပြီး ရှင်းရအောင် .. “ဇ” ရှိရင် ထွက်လာကြပါ။
နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်တွေ၊ မီဒီယာတွေနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှေ့မှောက်မှာ သမိုင်းအမှန်ကို နှစ်ဖက် Debate လုပ်ကြမယ်။
တကယ်လို့ အာရ်ကာန်မြေရဲ့ မူလပိုင်ရှင်က ရခိုင်တွေဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာတွေအားလုံး စက်လှေကြီးတွေနဲ့ ရောက်ရာပေါက်ရာကို ထွက်သွားပေးမယ်။
တကယ်လို့ အာရ်ကာန်မြေရဲ့ မူလပိုင်ရှင်က ရိုဟင်ဂျာတွေ ဆိုပြီး သက်သေပြနိုင်ရင် ခင်ဗျားတို့ ကိုရွှေရခိုင်တွေ အားလုံး ဗမာပြည်မကို ထွက်သွားပေးမလား? ဗမာပြည်မကရော ရခိုင်တွေအားလုံးကို လက်ခံပေးမလား?
“ဇ” ရှိရင်ထွက်လာခဲ့ .. ကျွန်တော်ပြောတာက solution တော့မဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးကသာ solution. သို့ပေမယ့် ခင်ဗျားတို့က လူများစုဖြစ်နေတဲ့အပြင် အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး အနိုင်ကျင့်လွန်းတာ မခံချင်တော့လို့
← President U Htin Kyaw…wait and see…that Kalar Byet / Kalar Dein Crow would pick-up the dry sh*t and eat soon
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ဖြစ်ပွားနေသည့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအား အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်နေသည့် လုပ်ရပ်များကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးရန်အစ္စလမ်မစ် ၃၉ နိုင်ငံညွန့် ပေါင်းတပ်ဖွဲ့→